Geedi Socodka Siyaasadeed Ee Somaliland 29 Sano Kadib+Habacsananta Dawladnimo Iyo Sabobta Keentay In Soomaliya Ku Soo Dhiirato Jaritaanka & Madaxbananida”W/Q Maxamud Jawhar | Gabiley News Online
)-Somaliland Madaxwaynayashii soo maray iyo mid waliba waxqabkisa Dalka uu ku kordhiyey ee diwaanka ugu jirta.
Madaxwaynihii hore Ee Somaliland Mohamed haji Ibrahim egal (AHU)waxa uu ahaa xeeldheere siyaasadeed oo leh aftahanimo Iyo karti hogaanimineed,
Markii Uu xukunka Somaliland qabtay Marxuum Cigaal wuxuu meel adag ka soo saaray oo Eebe ku guuleyey in colaadihii Daashatay umada uu Damiyo isagoo isticmaalaya aragti Siyaasad ku salaysan iyo waayo aragnimadii uu lahaa.
Waxa kale oo uu sameeyey hubka dhigistii Ciidamada iyo qulqulatooyinkii dagaalada ee dalka ka jiray isaga oo dhidibada u taagay Nidaamkii dawladnimo oo dhamaystiran.
Maxamed X ibraahin cigaal waxa uu dalka ka qabtay Aftidii Distuurka Jamhuuriyada Soomaliland oo Shacabku u Codeyeen 97% gooni isutaaga Qaranka Somaliland.
Madaxwayne Cigaal waxa uu bilaabay dadaalo badan oo uu guntida dhiisha iskaga dhigay sidii uu Aduunka Ictiraaf Uga keeni lahaa islamarkana Uga dhaadhicin lahaa Qadiyada Jamhuuriyada Somaliland.
Bal aynu milicsano Madaxwaynayshii ka danbeeyey oo la odhan karo Waxay la midyihiin qof loo dhiibay fure ama muftaax Guri cusub muraayado ah oo Dhawr dabaqa kaasi oo la yidhi la wareeg maamulkiisa iyo gacan ku hantiisa, kaliyana waxa laga rabaa inaad kontorosho jihayntiisa oo daryeesho.
Waxa kale oo xusid mudan Alle hawnaxaritee Madaxwayne Cabdiraxman tuur oo mudo Laba sano ah xilka Madaxwaynimo Somaliland hayey waxa talada loo dhiibay 1991 sanadkii 1993 na wuxuu ku wareejiyey shirkii Borma markii danbana Wuxu tagay Xamar oo uu kaga noqday Gooni istaagii Soomalind.
Madaxwaynihii xilka kala wareegay markii uu geeriyooday Maxamed Xaaji ibraahin Cigaal oo ahaa Daahir riyaale kaahin wuxuu sii anbo qaaday Horusodkii dhinaca dimuquraadiyada iyo hirgalinta doorashooyinka Dhawr ahaa oo uu dalka ka qabtay waxa kale oo uu Daahir rayaale fuliyey Dardaaranadii Cigaal ee dhinaca Ictiraaf raadinta Somaliland.
Waxa xilka kala wareegay Madaxwayne Rayaale sanadii 2010 Madaxwayne Axmed Maxamed siilanyo markii uu talada waxa lagu xasuusan karaa waxaqabadkii sanadkii ugu horeeyey oo uu dib u habayn laxaadle ku sameeyey xafiisyada Dawlada oo markaa dayac Faro badani ka muuqday inta guri dawleed Dhisan hada %60 waxa hirgaliyey Madaxwayne Siilaayo, laakin Sanadadii danbe waxa barbar socday musuq-maasuq xadhka Goostay.
Mudo xileedka siilaanyo waxa meesha ka baxay qadiyadaii Ictiiraaf raadinta oo lagu bedalay wax lagu magacabo wadada hadalada Somaliland iyo Somaliya oo noqotay arin ku cusub Dhagaha bulshada Somaliland iyo dhalinyarada da,yarta ee ay isku mar dhasheen Qaranka soomaliland, arinta wadahadalada oo mudo socotay Aakhirkii Waxay yeelatay waji ganacsi (Commercial issues.) Waxanay keentay jahwareer siyaasadeed oo ilaa haatan taagan.
Madaxwaynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi wallow aanu dhamaan mudo xileedkii la doortay hadana inta uu xukunka hayey waxa uu yareeyey musuq-maasuqii xadhka goostay iyo dhulkii hantada dawladu lahayd oo nimaad sharciga baal marsan loogu takrifalay,inta ugu badan waxa la qaatay hantida Dawlada wakhtitigii Xukamada Axmed siilanyo.
Madaxwayne Muuse Biixi ayaa soo celiyey Haamahii kaydka shidaalk ee Barbara oo dad gaar ah gacanta loo galiyey iyo nidaamka maamul ee Dawladnimo (decision making).
Dhanka kale Mudada uu talada hayey Madaxwayne Biixi waxa meesha ka baxay Qadiyada Ictiraaf raadinta Somaliland iyo xidhiidhka Beesha caalamka oo gaabis badan ku yimid.
Intii ay talada haysay Xukuumada uu hogaamiyo Madaxwayne Biixi waxa jirta hoos u dhac dhaqaale guud ahaan Dalka,waxay xukuumada Muuse Biixi sii anboqaaday jihada xukuumadii ka horaysay u leexisay dhinaca wadahadala soomaaliya iyo Soomaliland oo khataro badani ku laman yihiin.
Marka la eego cida gacanta ku haysa dhexdhexdinta wadahadala labada dhinac (arbitration) sidoo kale waxaa soo batay hadal haynta bulshada dhaxdeeda ee la xidhiidha wadahadalada Somaliland iyo Soomaliya iyo dhalinyarada u Shaqo tagaysa Xamar.
Hadaba Marka la eego Arimaha Siyaasada iyo jihada Somaliland u socoto Maxaa iska badelay Qorshaheedii hore?
Qalinkii; Saxafi Maxamuud Xuseen Jaamac ( jowhar)